Imagine Products at the 2019 NAB Show – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာထုတ်ကုန်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်
အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာထုတ်ကုန်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်
ဒီနှစ်ထုတ်ကုန်များ '' တဲကိုမြင်ယောင်ကြည့်မှာဆောင်ပုဒ်အသစ်ကလိုင်စင်ရွေးချယ်မှုများအသစ်မိတ်ဖက် Codex နှင့် Frame.io အသစ်တစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝငျ "သစ်" ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ '- ကြီးမားသောစတူဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များအနေဖြင့်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်စျေးဆိုင်များနှင့်လွတ်ရန် - ကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုသူများအကြီးများနှင့် small.The ဆောင်ပုဒ်ဘဏ်ဍာမှာထုတ်ကုန်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဘို့မိမိတို့ Workflows ပိုပြီးထိရောက်စေ' 'ကုန်ပစ္စည်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါကကူညီဖို့အားလုံးကိုရဲ့ဒီနှစ်တဲ' သစ်ကိုဖွစျလိမျ့မညျ "သစ်ကိုလိုင်စင်ရွေးချယ်မှုများအသစ်မိတ်ဖက် Codex နှင့် Frame.io အသစ်တစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝငျ။ ကြီးမားသောစတူဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များအနေဖြင့်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်စျေးဆိုင်များနှင့်လွတ်မှ - - ကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ဘဏ်ဍာအဘို့မိမိတို့ Workflows ပိုပြီးထိရောက်စေဒါဟာကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်ကုန်များ '' အသုံးပြုသူများကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါကကူညီမှအားလုံးပါပဲ။
နယူးလိုင်စင်များ, Bundles, ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Activation System ကို
ShotPut Pro ကို, ဗီဒီယို, အသံ, နှင့်ဓာတ်ပုံဖိုင်တွေ offloading များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံအသစ်တစ်ခုကြည့်နှင့် 2019 မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း features အသစ်တွေကိုရှိပါတယ် NAB ပြရန်။ အင်္ဂါရပ်နှစျယောကျပိုမြန်ဖြုတ်ပစ်ဘို့အသစ်တစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ mode ကိုပါဝင်သည်နှင့် MHL သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များကိုလည်းအသုံးပြုသူများပိုမိုပြည့်စုံလုပ်ငန်းအသွားအလာပူဇော်ဖို့မိတ်ဖက် Codex နှင့် Frame.io အတူလုပ်ကိုင်နေသည်ဆိုပါစို့။ အစဉ်မပြတ်သို့မဟုတ်ငှားရမ်း: အဆိုပါထုတ်ကုန်အသစ်လိုင်စင်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူကြွလာ။ အားလုံးအစဉ်အမြဲလိုင်စင်အသုံးပြုသူများက updates များကိုများ၏ 12 လအတွင်းပေးသည်တစ်ခု update ကိုအစီအစဉ်ပါဝင်သည်။ update ကိုအစီအစဉ်များကိုကုန်ဆုံးစေခြင်းငှါ, နေစဉ်, အသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့လိုင်စင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ကာ update ကိုအစီအစဉ်ရှိသည်ဖို့အတင်းအကျပ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အပ်ဒိတ်အစီအစဉ်ကိုကုန်ဆုံးခဲ့လျှင်သူတို့တစ်တွေလက်ရှိ update ကိုအစီအစဉ်ကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်သည်အထိအသုံးပြုသူများဆော့ဖ်ဝဲ၏ဗားရှင်းအပေါ်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်ကုန်များ '' သစ်ကိုအငှားလိုင်စင် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်အငှားပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အားကိုးကြောင်းဖောက်သည်များ၏အစဉ်အဆက်-တိုးပွားလာအစေခံဆိုပါစို့။ ငှားရမ်းခြင်းလိုင်စင်ဖောက်သည်, ပိုကြီးတဲ့အလုပ်ဖို့အလုပ်ဘူတာ add သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်မလိုအပ်လိမ့်မယ်စီမံကိန်းများအတွက် tools တွေပေး, သူတို့အကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်အံ့သောငှါထုတ်ကုန်နှင့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ပြုသည်။ ဤရွေ့ကားအငှားလိုင်စင်ထုတ်ကုန်များ 'ဆော့ဗ်ဝဲကိုမြင်ယောင်ကြည့်အများဆုံးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်တစ်ဦးစည်းလုံးအတွေ့အကြုံအတွက်အတူတကွကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်သောဆော့ဖ်ဝဲကို bundle နိုင်ပါတယ်။
ဤအတောအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဖောက်သည်၎င်းတို့၏လိုင်စင်များကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်ပေးခြင်း, သုံးစွဲဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရန်၎င်း၏ website နှင့် activation လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဒီဇိုင်းသိရသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ImagineProducts/ImagineProducts-ScreenShotSimpleModeNewMHLPDFreport.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ပိုမိုမြန်ဆန်များကိုဖြုတ်ပစ်နှင့် MHL သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အသစ်ရိုးရှင်းသော mode ကိုဖေါ်ပြခြင်း ShotPut Pro ကိုမျက်နှာပြင်, shot ။
ကုန်ပစ္စည်းများ Inc ကိုပြန်ဖွင့်ရုပ်ရှင်နှင့်မီဒီယာပညာရှင်များကိုဆန်းသစ်သောဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးအမြင်, ရှယ်ယာ, transcode, သူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှု archive ဆိုပါစို့။ , အစွမ်းထက်တတ်နိုင်နှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူဤအထူးပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာ applications များအဘယ်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုအပေါ်အားကိုးထုတ်လွှင့်, postproduction အဆောက်အဦများနှင့်အခြားသူများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော tools များဖြစ်လာကြပါပြီ။ ထက်ပိုမို 25 နှစ်ပေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမြင်ယောင်ကြည့် Indianapolis, USA တွင်အခြေခံသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.imagineproducts.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/ImagineProducts/190211ImagineProducts.docx
2019 NAB ပြရန် ႀကိဳတင္ၾကည့္
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=The%20theme%20for%[အီးမေးလျ protected]%[အီးမေးလျ protected]%20will%20be%20%22new%21%22%20New%20licensing%20options.%20New%20partners%20Codex%20and%20Frame.io.%20A%20new%20website,%20and%20more%20-%20http://bit.ly/2Gt2vHU
Google+ မှာ: plus.google.com/u/1/+Imagineproducts
Facebook က: www.facebook.com/ImagineProducts/
YouTube ကို: www.youtube.com/playlist?list=PL1qOnaKIxe8ux5kR0omkc28pO4rR2PSmo
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/imagine-products-inc/?trk=top_nav_home
Dundee တောင်ကုန်း Group ကနောက်ဆုံးရပို့စ်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Now Accepting Presentation Proposals for IP Showcase Theatre at METExpo 2019 in Sydney - ဇွန်လ 6, 2019
အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာ Videon ထုတ်ကုန်များ - မတ်လ 19, 2019
နောက်ဆုံးပေါ် Veritone aiWARE မြှင့်တင် AI အများ၏သူတို့ရဲ့မွေးစားခြင်း Expand နှင့်အရှိန်မြှင့်မှ Customer များ Enable - မတ်လ 15, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Codex frame.io ကုန်ပစ္စည်းများမြင်ယောင်ကြည့်ပါ NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB16 nabshow ShotPut Pro ကို	2019-02-11
ယခင်: VidTrans19 ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
နောက်တစ်ခု: စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝါရင့်ဘရိုင်ယန် Gleason PrimeTime Lighting ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့် Editor ကို
ဒစ်ဂျစ်တယ် Marketing Manager